निस्दीमा डाक्टर पाउनै मुस्किल, कोरोना नियन्त्रणमै ! - Sero Fero News
निस्दीमा डाक्टर पाउनै मुस्किल, कोरोना नियन्त्रणमै !
सेराेफेराेन्यूज प्रकाशित मिती - १३ जेष्ठ २०७८, बिहिवार
पाल्पामा दैनिक दुई हप्ता यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक झण्डै एक सय बढीको संख्यामा कोरोना सङक्रमितहरु थपिँने गर्दछन् । दश स्थानीय तह रहेको पाल्पाका अधिकांश गाउँपालिकाले डाक्टर सहितको कोरोना रोकथाम र उपचार गर्दै आएका छन् । तर पाल्पाको दुर्गम मानिने निस्दी गाउँपालिकामा भने डाक्टर नपाउँदा कोरोना उपचार गर्न मुस्किल परेको छ ।
निस्दी गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ६४ लाख रुपैयाँ रकम छुट्याएकोमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । गाउँपालिकाले नेपाल सरकारसँग अनुमति माग गरेर खोप खरीद गर्न थप रकम व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भगवानभक्त अर्यालले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘डाक्टर सहितको टिम व्यवस्थापन गर्न धेरै प्रयास र प्रयत्नहरु गर्यौ तर डाक्टर नपाए पनि अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले निरन्तर सेवा दिँदै आउनुभएको छ । हामीलाई होङसी सिमेन्ट, कालिगण्डकी फाउन्डेशन लगायतबाट अक्सिजन तथा अन्य स्वास्थ्य सामाग्रीहरु सहयोग समेत मिलेको छ ।’
पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकामा हालसम्म ९३ जना कोरोना सङक्रमितहरु रहेका छन् । जसमध्ये १२ जना कोरोनामुक्त भएर घर फर्किएका छन् । गाउँपालिकाले कोरोना सङक्रमितहरु घरमै आइशोलेशनमा रहेको जनाएको छ । गाउँपालिकामा अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले सङमितहरु अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै गाउँपालिकाले निस्दी ५, ढुङ्गानावेशीमा ७ वेड र केएम खाम्चा प्रतिष्ठानको भवनमा १३ बेडको आइशोलेशन निर्माण गरेको बताउनुभयो । गाउँपालिकाले डाक्टर नपाएपनि अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु खटाएर कोरोना रोकथाम तथा उपचारात्मक सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
निस्दीले विदेशबाट आएका भन्दा पनि शहरहरुबाट गाउँगाउँमा आएका व्यक्तिहरुले कोरोना सार्नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रत्येक वडामा २० बेडको क्वारेन्टाईन स्थल बनाईएको छ । निस्दी ५ बेलडाँडामा हेल्थ प्लस हेल्प डेक्स स्थापना गरेको छ । जिल्लामा कोरोना सङक्रमितहरुको संख्या बढेसँगै उपचारात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई तिव्रता दिँदै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र सचेतना कार्य गरिँदै आएको छ ।
पाल्पाको कहाँ कस्तो तयारी भयो ?
रामपुर नगरपालिकाले तीन स्थानमा पाँच÷पाँच शैयाको गरी पन्ध्र शैयाको अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पताल तयार पारेको छ । वडा नं १ स्थित गाँडाकोट स्वास्थ्य चौकी, वडा नं ९ जब्गादी स्थित टङ्कनाथ स्मृति भवन र १० गेझा स्थित भानुभक्त माविमा पाँच÷पाँच शैयाको कक्ष तयार गरिएको आइसोलेशन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका संयोजक हिमाल मल्लले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी रामपुर अस्पतालमा दश शैयाको अक्सिजन सहितको आइसोलेशन कक्ष तयार पारिदैछ । तत्कालका लागि तयार पारिएका तीन स्थानमा तीन÷तीन वटा अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको छ ।
नगरपालिकाले पचास वटा ठुला सिलिण्डर अक्सिजन व्यवस्थापन गर्दैछ । हाललाई भने वीस सिलिण्डर अक्सिजनको व्यवस्था छ । यसैगरी रामपुर अस्पतालले आफ्नै व्यवस्थापनमा दश शैयाको अक्सिजन सहितको आइसोलेशन कक्ष तयार पारेको अस्पतालका निमिक्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन डाक्टर विजय परियारले जानकारी दिनुभयो ।
रम्भा गाउँपालिकाले तत्कालका वडा नंं ५ ताहँुमा पाँच शैया र वडा नंं १ हँुगीमा पाँच शैया गरी दश शैयाको कोभिड अस्पताल संचालनमा ल्याएको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि पालिकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा शिल गरेको छ । रम्भाका पाँचवटै वडामा कम्तिमा वीस÷वीस शैयाको अक्सिजन सहितको आइसोलेशन कक्ष तयार पारिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले वडा नं ४ स्थित छहरामा दश शैयाको कोभिड अस्पताल तयार पारी संचालनमा ल्याएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । यस पालिका पाल्पा जिल्लाका दश पालिका मध्ये कोरोना सङ्क्रमणको दरमा दोस्रो स्थानमा पर्दछ । पुर्वखोला गाउँपालिकाले दश शैयाको कोभिड अस्पताल संचालनमा ल्याएको छ ।
तिनाउँ गाउँपालिकाले वडा नंं २ दोभान स्थित दोभान माविमा दश शैयाको कोभिड अस्पताल निर्माण गरी स्वास्थ्यकर्मी, खानपान, विभिन्न स्वास्थ्य उपचार सामग्री सहितको प्रबन्ध गरी संचालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ति मगरले बताउनुभयो ।
बगनासकाली गाउँपालिकाले वडा नंं २ स्थित पोखराथोकमा दश शैयाको कोरोना अस्पताल संचालनमा ल्याएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पालिकाले पचास वटा अक्सिजन सिलिण्डर खरिद गरिदैछ । यस गाउँपालिकाले बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहजता ल्याउन घर घरमा पुगेर औषधी उपचार सेवा दिदै आइरहेको छ ।
रिब्दिकोट गाउँपालिकाले पाँच शैयाको कोभिड अस्पताल संचालनमा ल्याएको छ भने पचास शैयाको अक्सिजन सहितको आइसोलेशन कक्ष तयार पारेको छ । सङ्क्रमित बिरामीको मनोबल बढाउन घरमै पुगेर जानकारी लिने काम भइरहेको र अप्ठ्यारो परेमा कोभिड अस्पताल सम्म लैजाने गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादुर जिसी बताउनुहुन्छ ।
माथागढी गाउँपालिकाले वडा नं ४ मा पन्ध्र शैयाको अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पताल संचालनमा ल्याएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापा मगरले बताउनुभयो ।“अस्पताल पनि बिरामीले भरिदा शैया नपाएर अकालमै मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था छ, पालिकाले स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीको प्रबन्ध गरी अस्पताल संचालनमा ल्याएको छ, सङ्क्रमित बिरामीको दर बढ्दै गएको खण्डमा थप शैया तयार पार्नेछौँ” अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो ।
तानसेन नगरपालिकाले भने जिल्ला अस्पताल पाल्पामा तीस शैयाको अक्सिजन सहितको कोराना अस्पताल निर्माणको काम गरिरहेको नगर प्रमुख अशोककुमार शाही बताउनुहुन्छ । जिल्ला सदरमुकाम तानसेनमा कोरोनाका बिरामीको दर पनि बढ्दो रहेको छ ।